Cidaanu nahey - Inncovid.Norge
Inncovid.Norge waxaa bilaabay jaamacada Bergen iyadoo lala kaashanayo maxado kale si looga jawaabo dillaaca cudurka koroanaha ee ka dhacay Norwey. Dhammaan cilmi baadhayaasha ku lugta leh waxey asal ahaan ka soo jeedaan dalal debeda ah, waxeyna ka walaacsanyihiin xaaladda ajaanibka ee faafitaanka koroonaha. Mashruucan waxa taageeray ururka NOAS qayb ahaanna waxaa maalgeliyey Stiftelsen Dam.
Hadafkayagu waa labo dhinac: Dhinac, waa in Inncovid.no, caawiyo dad badan oo ajaanib ah si ay u helaan macluumaad la fahmi karo iyo ku soo ururinta goob keliya macluumaadka ku saabsan luqadooda si loo xakameeyo faafka cudurka koroona. Dhinaca kale, waxaan xaaladan ka baran doonaa sida ajaanibku i) u helaan macluumaadka, ii) fahanka iyo maareynta halista iyo tillaabooyinka la soo rogey, iyo iii) maaraynta cudurrada inta lagu guda jiro faafitaanka cudurka covid-19 ee Norwey. Waxaan rajayneynaa in aqoonta aan ka barano waxa maanta dhacaya ay mustaqbalka naga caawin doonto inaan siino dhammaan dadka adeegyo caafimaad oo ka sii wanaagsan.
MUHIIM: Haddii aad bukto caawimaad kuma siin karo. Hddiii aad xanuun dareemeyso la xidhiidh dhakhtarkaaga, gargaarka degdega ama AMK haddii xaalad degdeg ahi jirto, Marka meelahaas la hadleyso u sheeg haddii aad leedahey astaamaha neefsashada.
Sidoo kale haddii aad isku aragto astaamaha neefsashada ka diiwaangeli barta koronasjekk.no (af-noorwiijiga)